Ukuzibandakanya Kwe-imeyili Kuqhathaniswa Kanjani Nokuzibandakanya Komphakathi | Martech Zone
Ngokushesha nje lapho ngibona Ukuqhathanisa esetshenziswe esihlokweni sendatshana kwezentengiso, ngithola ukumangala okuncane. Lokhu infographic engezansi kusuka kuDevesh Design wenza umsebenzi omuhle wokubeka kahle isidingo samakhasimende ukusebenzisa i-imeyili enkampanini yabo. Anginakungabaza ngamandla we-imeyili futhi yikhono njenge ukumaketha kwe-push ubuchwepheshe bokukhuthaza ababhalisile ukuthi bathathe isinyathelo. Kuyasebenza… futhi wonke umuntu kufanele akwenze.
Kodwa-ke, ukuqhathaniswa kwe-imeyili nezenhlalo ngama-apula namawolintshi. Imithombo yezokuxhumana inezinzuzo eziningi kakhulu ngaphandle kokuchofoza isikhangiso nokuguqula. Imithombo yezokuxhumana iyesabeka ekutholeni umyalezo wakho. Ngakho-ke ake sisebenzise isibonelo ku-infographic engezansi. Uthumela i-imeyili kwababhalisile bakho abayi-1,000 202 futhi kuholela ekutheni abantu abangama-33 bavule leyo imeyili futhi abangama-XNUMX babo bayichofoze.
Manje ake sabelane ngalokhu okuthunyelwe ezinkundleni zokuxhumana lapho unabalandeli abangu-1,000 10 ku-Twitter naku-Facebook. Ngokusho kweshadi, mhlawumbe abantu abayi-3 balibonile futhi abathathu balichofoza. Lokho kuzwakala kubi impela akunjalo?
Cha, akuyona into embi. Nakhu ukuthi kungani. Okuqukethwe okwenyuse ngokuxhumana nomphakathi kwabelwane ngakho ngabambalwa balabo bantu. Labo bantu abambalwa banabalandeli abangaphezu kuka-20,000 100,000. Futhi abalandeli babo bafinyelela ngaphezulu kwabalandeli be-XNUMX. Futhi abalandeli babo bafinyelela izigidi. Akekho ovule i-imeyili yakho kaningi futhi akuvamile ukuthi noma ngubani athumele i-imeyili kumngani wakhe. Kepha igagasi lomsebenzi wezenhlalo laqhubeka izinyanga.
Sine okuthunyelwe on Martech Zone lokho kusathola izinkulungwane zokubukwa namakhulu okuchofozwa ngemuva kweminyaka sibabhalile sibonga imithombo yezokuxhumana. Ukungasho ukuthi lawo masheya ezenhlalo aholele ekutheni abanye abantu babhale izindatshana futhi basikhombe, okwaholela ekwandeni ukukleliswa kwezinjini zokusesha, okuholele ekutholeni okuphezulu kwosesho lwezinto eziphilayo, okwaholela ekuchofozeni nasekuguqulweni okuningi.
Kuyi-infographic enhle esekela ifayela le- amandla amangalisayo we-imeyili. Kepha ukwehlisela ezinkundleni zokuxhumana iphutha elikhulu kunoma iyiphi inhlangano. Futhi asikhulumi nangomthelela ongaphezu kokuchofoza nokuguqulwa. Umphakathi unikeza ithuba lokwakha igunya emehlweni omphakathi, ukufeza ukwaziswa okumangazayo ngezenzo ezinhle zesevisi yamakhasimende, kanye nokuphila kwesikhathi sangempela i-imeyili esikukhumbula ngokuphelele esikebheni.
Tags: Umklamo kaDeveshukuzibandakanya kwe-imeyiliimeyili kuqhathaniswa nomphakathiukuzibandakanya komphakathiUkuqhathanisa